> Household wear>MOBILE3DRAWERS
Mobile pedestal with3drawers central lock and lockable castors. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါသည့် အံဆွဲ (၃)ခုနှင့် ရွေ့လျားနိုင်သောတိုင်ခုံ။ Size: W38.8*D56*H68.1 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈.၈၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၆၈.၁ စင်တီမီတာ
Mobile pedestal with3drawers central lock and lockable castors. ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါသည့် အံဆွဲ (၃)ခုနှင့် ရွေ့လျားနိုင်သောတိုင်ခုံ။ Size: W38.8*D56*H68.1 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၃၈.၈၊ အနံ ၅၆၊ အမြင့် ၆၈.၁ စင်တီမီတာ Central lock key system / lockable casters ဗဟိုလုံခြုံရေးသော့စနစ်ပါဝင်သည်။ / ဘီးများအား lock ချထားနိုင်သည်။